योजना कार्यान्वयनको पाटो र विदेशीएका युवा
शान्ता बाँस्कोटा कोइराला सोमबार, मंसिर ८, २०७७ मा प्रकाशित
चार जात छत्तिस वर्णलै सजिएको नेपालका नेपालीहरु- अव के चाहन्छन् ? वर्तमान सरकारले गंभीर रुपले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । विकासलाई कसरी अगाडि बढाउने । गहिरो सोच विचार दुरदर्शी योजना, जसलाइ कुनै कालखण्डमा टंकप्रसाद आचार्य, विपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीहरुले अगाडी सारेका थिए । तर सोच मात्रले नहुने रहेछ । सोंचले मात्र हुने भए नेपाल अघिल्लो शताब्दिमै विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बनिसक्ने थियो ।
तर, सोंचले मात्र केही हुंदैन । दुर्भाग्य कस्तो रह्यो भने एकातिर देशको विकासको लागि फराकिलो दृष्टिकोण र सोंच राख्ने मानिसहरु सत्तामा पुग्नै सकेनन् भने जसो तसो सत्तामा पुगेकाहरुलाई कामै गर्न दिइएन । उनीहरु लामो समय सत्तामा रहन सकेनन् । टंकप्रसाद, विपी र मनमोहनको सोंच, कार्यशैली, इमान्दारिता, नैतिकता र नियतिलाई हेर्ने हो भने हाम्रो देश विकासमा किन पछाडि पर्यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यी नेताहरु फराकिलो सोच्ने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने प्रयासमा पनि थिए । तर, शायद नियतीको खेल अर्कै थियो । त्यसैले उनीहरु सत्तामा लामो समय रहन पाएनन् ।
स्पष्टै कुरा हो कुनै पनि सरकार वा सम्वन्धित निकायले अगाडि सार्ने योजना, कार्यक्रम, आदि देश विकाससंग लक्षित हुनु पर्ने हो तर व्यक्ति विकास मात्र भएको छ । कुनै एउटा क्षेत्र वा कुनै एउटा राजनीतिक पार्टी अथवा कुनै संस्था भन्ने अवस्था नै रहेन । योजना निकै राम्रो बनाउने तर कार्यान्वयनमा पटक्कै ध्यान नदिने प्रवृत्ति नेपालीको साझा प्रवृत्ति बनेको छ । यसले देशको भविश्य कहां पुर्याउला ?
हरियो वन संरक्षण गर्दै जोगाएर राख्ने र वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गरी अर्थोपार्जन गर्ने योजना कार्यक्रम बनाउने र युवापुस्ताको स्वरोजगारको योजना तर्जुमा कागजमा मात्र होइन् जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरि योजना तर्जुमा गरिनु पर्दछ । नेपाल सरकारले ल्याएको कार्यक्रमा हामी नेपाली जनाता आँफै काम गर्न पाए आहा कति सुन्दर अनि राम्रो हुने थियो । विकास प्रेमी दाजुभाई दिदीबहिनीहरु कति खुशी हुदै इमान्दारका साथ काम गर्थे होला । उनीहरुमा खाडि मुलुकमा जाने सोच आँउदैन थियो होला ।
त्यो स्थिति आउन नदिने काम कस्को हो ? निश्चिय पनि हरेक व्यक्ति, परिवारको हो । तर, सबभन्दा ठूलो भूमिका त सरकारकै हो । यसवारेमा सरकारले सोचेको छ ? कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ?
अनि हामी कुरा गर्दछौं एमसीसी जस्ता ठूला परियोजनाको । ती परियोजनाहरुको उद्धेश्य ठीक छन् कि वेठीक त्यो आफ्नो ठाउंमा छ । तर, मुख्य कुरा त कार्यान्वयनको हो । सही नियतले, देश र जनताको सर्वाेपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने दातृ राष्ट्र र संस्थाहरुमार्फत आउने जस्ता सुकै परियोजनाहरुबाट सकारात्मक परिणाम लिन सकिन्छ । तर, सरकारमा वस्नेहरुको नियत खराब भएपछि कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएपछि जस्ता सुकै परियोजनाहरु पनि जनताको लागि असहज र पीडादायी हुन्छन भन्ने कुरा मेलम्चीदेखि बुढीगण्डकीसम्मका परियोजनाहरु हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ । यदि सरकार चलाउनेहरुको नियत सही भएको भए, कार्यान्वयन क्षमता राम्रो भएको भए मेलम्ची आयोजना वर्षाैं अगाडि पुरा हुन्थ्यो । त्यसको लागत पनि अहिले भन्दा दशौं गुणा कम हुन्थ्यो ।
जल, जमिन, ऐतिहासिक सम्पदा, हिमाल, पहाड, तराई, डाँडा काँडा,सर्वौच्च शिखर सगरमाथा, अनिबौद्ध भूमी, बुद्ध जन्मिएको देश, वैदिक संस्कार र संस्कृतिको आर्शिवाद प्राप्त गरेको देशलाई डलर भित्राउने योजना, कार्यक्रम किन बनाउन नसक्ने सरकार ? प्रकृतिले वरदान दिएको देश स्वर्ग भूमी किन हामी यसलाई अपनत्व ठानेर विकासको योजना, पर्यटक भित्र्याउने योजना किन नबनाउने । आफै आउँछ डलर ? नेपालीहरुका लागी काम अनि दाम पनि पाउने अवस्था बन्ने तर्फ योजना किन नबनाउने ? नेपाली युवालाई विदेश नै जानु पर्छ भन्ने छाप किन पार्दैछौ सरकार ?
किन जाने विदेश ? लाश भएर आउनलाई ? किन शरिरका अंगलाई पैसामा साट्नलाई ?आफ्नो गाँउ आफै वनाउ भन्ने मुल मंत्रलाई आत्मसात गर्दै युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिनु पर्दछ ।
वैदिक संस्कार र संस्कृति बोकेको देश अनि आफैमा जैविक भएको देश आज आएर विदेशीले नै प्रांगारिक भनेको यस्तो हो भनेर पाठ पढाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । विश्वले हामीबाट सिकेको जैविक कृषि आज हामी आफैं जैविक कृषिको सिकाइमा दैनिक रुपमा कमजोर हुँदै जादैछौँ । हामीबाट सिकेर विश्व आज अर्गानिक खेती पद्धत्तिलाई जीवन शैली बनाउन थाली सकेको छ तर हामी बिसाक्त खाना सागसब्जी फलफुल आदि खाएर प्राण घातक रोगहरुको सिकार भइरहेका छौं ।
अनुकुल जलवायु, प्रशस्त नदीनाला विविध भु-धरातल आदि र उर्वरा शक्तिका हिसाबले हाम्रो देश विश्वमा नै अग्रभागमा आउँछ । तर आज हाम्रा युवा विदेशमा गएर अरुकै खेति गरेर रमाउनु पर्ने बाध्यता छ । कृषि हाम्रो सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्दैन ? जैविक कृषिलाई मात्रै सहि ढंगबाट अवलम्बन गर्ने हो भने हाम्रो उत्पादन विश्व बजारमा उच्चमाग हुन्छ । हामीले हाम्रा उत्पादन बजारमा माग भए जतिको पुर्ति गर्न नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ । यसरी निर्यात बढाउन सके नेपालीको जीवनस्तर ह्वात्तै उकास्न सकिन्छ । अझै पनि ढिला भएको छैन् । जैविक कृषिलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हो भने यही अरब हुनेछ, यही इजरायल हुनेछ, यहीं कतार र कोरिया हुनेछ र हाम्रा नयाँ पुस्ता गर्वले छाती फराकिलो बनाएर जीवन जीउन सक्नेछन ।
वौद्धिक संस्कार र संस्कृतिलाई बचाई राख्दै जैविक उत्पादन गर्देै नैपाललाई स्वर्ग बनाउने कल्पनाका साथ योजना लिएर अगाडि बढ्न अब सरकारले ढिलो गर्नु हुन्न ।
स्वर्गिय आनन्द लिन, जैविक उत्पादन हेर्न, हिमाल, पहाड, उकाली, ओराली चड्नलाई नै आफै आउछन् पर्यटक । सरकार निदाएर नबस, नेपाल र नेपालीलाई आत्मा सम्मान हुने काम गर र गर्न देउ । विश्वसामु नेपाललाई चिनाउदै जाउ ।
आफ्नो निजी स्वार्थ पूर्तिमा मात्र नलाग, सही पद्धत्तिको विकाश गर । संस्कारयुक्त सहकार्य गर, इमानदार बन हाम्रो नयाँ पुस्तालाई के सिकाउने हो सोच । वलात्कार, हत्या, हिंसा, रोक्ने दरिलो कानून बनाउ ताकी हिंशाजन्य कुरा कसैले सोच्न समेत नसकोस ।
ठूला साना सबैलाई एउटै नियम, कानून लगाउ । मानसिक र शारिरीक स्वस्थ्य रहेर भयरहित भएर काम गर्ने वातावरण सृजना सरकारले गरिदियोस । नेपालको उद्योग धन्दाको स्थापना रोजगार अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिने संभावना प्रसस्त छ । युवाहरु विदेश गएर तिनिहरुले लिएर आएको रेमिटान्सले देश चलाउन खोज्दा रेमिटान्सबाट आएको पैसा विदेशबाट आयत गरिएको सामान खरिद गर्नमा खर्च भैरहेको छ । पहिला पहिला नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात गर्दथ्यौं तर आज आएर विदेशबाट आयात गरिएको बिषाधि मिसिएको खाएर विरामी भइरहेका छौ । त्यसपछि त्यहि औषधि गर्न, किन्न विदेश नै पैसा पठाइरहेका छौं । त्यसैले अब रेमिट्यान्सको पैसामा गर्व गर्ने होइन त्यसलाई शुन्यमा झारेर देशका डाँडाकाँडामा पैसा फलाउन सक्ने योजना चाहियो सरकार ।
नेपालका हाल खेतियोग्य जमिनमध्ये करिब ४० प्रतिशत जमिन खाली छ । तर नयाँ पुस्ताको सानो सपना कतार र मलेसिया भएको छ भने ठुलो सपना अष्ट्रेलिया र अमेरिका भइरहेको छ ।
वर्तमान सरकारले कृषिक्रान्तीको कुरा भाषणमा मात्रै गर्ने र व्यवहारमा नउतार्ने हो भने त्यो नेपाली जनतामा गरेको कुनै अपराधभन्दा कम हुने छैन । नेपाली जनताले निर्वाचनताका गरेको विश्वास अब धेरै दिन संम्म कायम राख्न सक्लान जस्तो छैन । अतस् सरकारले देशमा रोजगारीको सु व्यवस्था गर । युवा शक्तिलाई विदेशीन बाध्य नपार । देशव्यापी रुपमा विकास निर्माणको काम निर्वाध ढंगले गराउ । नेपालीको श्रम नेपालकै उन्नती र प्रगतीमा आधिक मात्रामा प्रयोग हुने वातावरण श्रृजना गर सरकार ।
शान्ता बाँस्कोटा कोइरालाबाट थप